Fiidyaw Tababarka Gaadhi Xamuul Clean Diesel aha | Puget Sound Clean Air Agency, WA
Ku soo dhawow dariska onlaynka ah. Fiidyowyadan taxanaha ah, waxaanu kaa caawin doonaa inay kuu iftiinto mishiinka gaadhiga clean diesel ah si markaa si dhaanta aad ugu fahmi karto gaadhigaaga xamuulka, sarena ugu qaadi karto waxtarkiisa kuugu bato.
Gawaadhida cusub waxay leeyihiin teknooloji lagaga hortago wasakhda naaftada. Wasakhda tuunbada hawada naaftadu wuxuu saameyn karaa cid kasta – gaar ahaan kuwa ku nool, ka shaqeeya iyo kuwa taga dugsi ku dhaw jid baabuurta oo wayn. Wasakhda gawaadhida naaftada ee hore waxay keeni karaan dhibaatooyin caafimaad oo halis ah sida xiiq, wadne xanuun, kansar iyo jirada lagu dhasho.
Dariskan fiidyowga ah waxay ku tusin doontaa sida aad u daryeelayso gaadhigaaga clean diesel, oo iska ilaali inaad u samayso dayactir qaali ah, oo lacagta shidaalkana hoos u dhig. Tobobarkan waxaa loo qaybinayaa todoba fiidyaw.
1. Fahanka kaaga Clean Diesel Baabuurta waa wayn
Qodobada Muhiimka ah
Fahanka sida baabuurkaagu u shaqayn karaa:
Caawisa dhammaynta cadhadda
2. 5 Qaababka Clean Diesel Baabuurta waa wayn Way kala duwan yihiin
Clean diesel Baabuurta waa wayn waxay u shaqeeyaan si ka duwan baabuurtii waa waynad ee hore
Idling waxay waxyeeshaa injiinka
Nalka kawarka la iskama dhaafi karo
Liigaga waa in la sameeyaa isla markaaba
Ideal RPM way ka duwantahay
Dayactirku aad ayuu muhiim u yahay
3. Clean Diesel Qalabka Maamulka Wasakhaynta Hawada ee Baabuurka wayn
Is barbar dhiga Nidaamka DPF iyo DEF
Gudaha 2007 iyo injiinadaka cusub
Ururiyaa gubashada (soot) iyo dambaska (ash)
Waa in gacanta lagu nadiifiyaa si looga saaro dambaska
Gudaha 2010 iyo injiinadaka cusub
U beddelaa igsooska mid ka waxyeelo yar
U baahan yahay DEF dareere
Igsaaska kulul waxa uu nadiifiyaa baabuurkaaga wayn DPF
Haddii kaaga DPF nalku uu daaran yahay, waa inaad qaadaa tallaabo
Si adaga leewarka u saar injiinka si loo sameeyo Active Regen (ikhtiyaar)
Haddii taasi aanay shaqayn, bilow Parked Regen
Haddii taasi aanay shaqayn, u qaad baabuurkaaga wayn si looga shaqeeyo
5. Qeybaha injiinka ee saameeya DPF
U dayactir dhammaan injiinkaaga si caadi ah si aad isaga ilaaliso DPF problems
Haddii aad ku qabto dhibaatooyin joogta ah kaaga DPF, ka eeg inta soo hadhay injiinkaaga dhibaatooyin kale
6. Dayactirka lacag kaydinta
Ka hubi injiinkaaga maalin kasta liigitaanka & isticmaalka dareeraha
Hubi inaad ogtahay:
Habka caadiga ah ee Baabuurkaaga wayn jadwalka dayactirkiisa
Marka baabuurkaagu u baahdo clean diesel makaaniga
U samee dhibaatooyin kasta si degdeg ah!
7. DPF Nadiifinta iyo Beddelida
DPF Nadiifinta iyo Beddelida
Makaani ha nadiifiyo ama ha beddelo DPF ugu yaraan hal mar sanadkii
Husbo in makaanigu:
Hubiyaa DOC iyo SCR waxyaabaha ku gufaysma
Sameeyaa kululaynta isgaaska
Buuxiyo DPF Cleaning History Xaashida (DPF Nadiifinta keliya)
Ka qiima jaban
Laga yaabo inay u shaqayso ama aanay u shaqayn si sax ah
Fadlan kadiskan gal si aad u aragto inta ay aqoontaada gaadiidka Clean Diesel le'eg tahay!
Barnaamijka Fagtuurka Nadiifinta DPF waa la xidhay. DPF Fagtuurka Nadaafadu iminka lama heleyo.
Hadii aad wax su’aal ah qabto fadlan la hadal 206-689-4057 ama iimeel u dir bethc@pscleanair.org.
Puget Sound Clean Air Agency Waxay jeclaan lahayd inay qof kasta u mahad celiso kuwaas oo ka caawiyay inay suurageliyaan tababarka fiidyahan, ay ku jiraan darawalda baabuurta wayn ee lagu arkay taxanaha fiidyahan, kuwan bixiyay khibradooda farsamada dayactirka baabuurta waa wayn, iyo xubnaha bulshadda ka caawiyay turjumaada fiidyahan.
Puget Sound Clean Air Agency ma taageerto summado gaar ah ama alaaboooyin.
Dhammaan summadaha laabta lagu muujiyay fiidyahan waxaa loo bixiyaa sidii tusaalooyinka waxbarasho oo keliya oo ku daristooda fiidyahan looma qaadan karo taageerada Puget Sound Clean Air Agency.